Panama: Fahatsiarovana an’i Raúl Leis · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2011 4:44 GMT
Taorian'ny nahafatesany, nivoaka tamin'ny gazety sy tany amin'ny bilaogy ny asa sorany sy ny momba azy, izay nanasongadina ny zava-bitany, ny nataony sy ny fandraisany anjara tamin'ny fiaraha-monina Panameana. Tao koa ny teny mampihetsim-po nanaovam-beloma azy sy ny fampahafantarana ny lova navelany.
Sarin'i Raúl Leis, nahazoana alalana avy amin ny Raúl Leis Arce's.
Tao amin'ny gazety La Prensa, Daniel Domínguez [es] manazva ny antony naha-mpanoratra “feno” an'i Raul Leis, ary nomeny endrika literatiora ny famaritana ny zavabitany .
Ny bilaogy literatiora Minitextos [es] sy ny Directorio de Escritores Vivos de Panamá [es] namoaka ny boky mitantara ny momba azy, izay ahafahan'ny mpamaky mahita ny asa sorany amin'ny ankapobeny ka hahazoan'izy ireo mahazo tsara ny hevitra tiany ambara amin'ny asa sorany.
Fa ankoatra ny boky milaza ny momba azy sy ny zavabitany, dia miresaka ny marika napetrany koa ny bilaogera.
Ao amin'ny bilaogy Internatural [es], Edilberto González Trejos milaza ny fandraisany ny vaovao tamin'ny 1 may:
Nanaitra ahy tanteraka ny fandrenesako tany Arzantina fa maty i Raul Leis, tahaka ny voakapoka aho, mihetraketraka ny vintana.
González Trejos [es] mahatsiaro ny fotoana farany nahitany azy, navoitrany tsara ny toetrany sy ny fihetseham-pony izay sisa navelan'ny fahafatesana:
Mahiratra, tia olona, mandray andraikitra ary mahatsapa tsara ny mahazo ny tontolo manodidina azy, izy no nataoko ohatra nandritra ny fotoana nianarako tany amin'ny ambaratonga faharoa.
Manoloana izao fahabangan'ny hasina izao, olo-mendrika no nandao antsika, tsy misy ny azo atao afa-tsy ny fandraisan'ny tanora mitovy amiko ny andraikitra, isika, “raiso ny fanilo”.
Nanohina ilay mpanao gazety espaniola Francisco Gomez Nadal koa ilay vaovao, monina any ivelany izy satria noroahina hiala ny firenena tamin'ny faran'ny volana febroary tamin'ity taona ity, ao amin'ny bilaoginy elmalcontento [es], izy no mitantara ny alahelony amin'ny tsy maha any Panama azy:
Raha safidiko ny nandao an'i Panama, dia ho tany an-toerana aho androany. Tokony nandray fiaramanidina tamin'ny alatsinainy aho, raha naheno ny fahafatesan'ny namako anankiray, tsy hiezaka ny hanatratra ny tsy azo tanterahina anefa, fa mba hifanotrona amin'ny nilaozany rehetra.
Gómez Nadal koa nanoratra mikasika ny lova napetrany ao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'ny Otramerica [es], notsindriany tsara fa:
Nahomby tamin'ny fianarana nataony izy ary nandray andraikitra tamin'ny fiainanana andavanandron'ny Panameana mihitsy.
Ao amin'ny bilaogy Panamanian Literature Today [es], Jose Luis Rodríguez Pitty miombona alahelo amin'ny fianakaviana sy namana, nandefa ny boky mirakitra ny mombamomba azy sady manome rohy hidirana amin'ny tantara fohy roa nosoratan'i Raúl Leis.
Ao amin'ny Medio Cerrado [es], Joao Q manoratra “Fahatsiarovana an'i Profesora Raúl Leis”. Mizara ny zavatra tsapany tamin'ny andro niresahany tamin'i Raul Leis ny mpanoratra. Nolazainy ny fahaizany manazava ny resaka sarotra anankiray amin'ny fomba tsotra sy feno vazivazy, ka mahatonga izany ho mora tahaka ny “2 ampiana 2 mira 4″ [es]. Joao Miresaka momba ny sosokevitra kely natolotr'i “Profesora” azy indray mandeha izay izy,
Noraisiko ho zava-dehibe izay nanomboka hatreo : “Tsy maintsy manokana fotoana ho an'ny fianakavianao sy hialanao sasatra ianao. Maro amin'ireo mpiara-miasa no tsy manana fahasalamana sy fiadanan-tsaina intsony satria be loatra ny ataony.”
Noho ny fisian'ny boky mitantara ny momba azy, ny lahatsoratra maro sy fanehoana hevitra samy hafa nosoratana momba ity manam-pahaizana ity, dia nanana ny anjara toerany teo amin'ny sehatry ny literatiora ny zava-bitany tamin'ny nahazoany ny loka Ricardo Miró in Panamá [es] sy ny Plural tany Meksiico, sy ny hafa koa; ny tantara tsangana nosoratany izay navoaka ho hitan'ny olona; ny zava-bitany teo amin'ny sehatry ny asany; ny andraikiny teo amin'ny fiaraha-monim-pirenena Panameana ary indrindra, ny nandraisan'ireo nifanerasera taminy ny nataony ka nahatonga ireto farany hanana hetaheta hianatra handroso hatrany.
Ho fanomezam-boninahitra azy, namoaka tranonkala[es] ny fianakaviana Leis Arce hamoahana ny asa soratry Raúl Leis. Ao anatin'izany no manazava ny zanany lahy Raúl Leis Arce :
Ity tranonkala ity no anankiray amin'ireo faniriana farany nokasain'ny raiko Raul Leis Romero atao. Ho fanomezam-boninahitra azy, ny asany sy ny ohatra navelany. Norafetina ny pejy tamin'ny ankamaroan'ny asany sy fankasitrahana ireo mpankafy maneran-tany, ka nanaja sy nankasitraka azy. Isaorana eto ianareo rehetra.
Ao amin'ny Medio Cerrado [es], mamehy ny voalaza rehetra amin'ny alalan'ny fizarana ny mpanoratra :
Ny farany tsy maintsy lazaiko, na dia ohatry ny efa mahazatra ihany aza : tsy maty akory i Raul Leis, navelany ho antsika ny lahatsoratra fanehoan-kevitra nosoratany, ny bokiny, ny tantara tsangana, izay mampiseho amintsika foana ny hevitra tsy mety maty tao aminy isaky ny mamaky azy ireny isika, tsy maintsy ambara fa amin'ny fotoan'ny tsy fahamarinana tahaka izao, tsy azo avela hanidina sy ho feno vovoka fotsiny ireny teny rehetra ireny